Dolly Parton နှင့် Miley Cyrus တို့ဆက်စပ်ပါသလား။ သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွင်းပိုင်း - Dolly Parton နှင့် Carl Dean ၏ Sweet Romance အတွင်းပိုင်း
Big Movie Line ပဟေ:ိ - စနေနေ့ည။
Dolly Parton ကိုသင်သိပါသလား Miley Cyrus ၏အဖွားဖြစ်သူလား
Miley Cyrus ၏ ၂၀၁၂ Jolene ၏အိမ်နောက်ဖေးမှာ Sessions အဖုံး မကြာသေးမီက Dolly Parton ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် အမြင်ပေါင်းသန်း ၃၀၀ ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည် YouTube မှာကြည့်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းလှတယ် သို့တိုင်အချို့အတွက်သီချင်းရွေးချယ်မှုသည်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်နေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Miley ဟာနောက်ကွယ်ကမိန်းမနှင့်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့သင်သိပါသလား အထင်ကရ 1973 ခုနှစ် hit ? မယုံဘူးလား Dolly Parton ဟာ Miley Cyrus ရဲ့အဖွားပါ။
Dolly နှင့်အတူ 2019 အင်တာဗျူးအတွက်သူတို့ရဲ့အထူးနှောင်ကြိုးအကြောင်းကိုဖွင့်လှစ် SiriusXM ၏ ဂျဲနီ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကသူမ၏ဖခင်၊ တိုင်းပြည်အဆိုတော် Billy Ray Cyrus နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီးနောက် Miley ၏မိခင်ဖြစ်လာပုံကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
လမ်းခွဲခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သမ္မာကျမ်းစာ ပိုဒ်များ
'ငါသူ Billy Ray နဲ့အတူသူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတလျှောက်လုံးမှာ Achy Breaky Heart' နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ 'သူကကျွန်တော်အစောပိုင်းကာလတွေမှာပြခဲ့တဲ့ပြပွဲတွေမှာသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူကငါ့အပြပွဲအချို့ကိုဖွင့်လှစ်။ ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိကျွမ်းလာတယ် ငါ 'Romeo' လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးပြီးသူ့ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုမှာထည့်ပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးတိုင်းပြည်ကလေးတွေဖြစ်လို့ပေါ့။ ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောနေတာပျော်စရာအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ Miley လာတဲ့အခါငါပြောတာကသူမဟာကျွန်မရဲ့သမီးလေးပါ။ '
နှင့် 75 Dolly, 75, ခေါင်းစဉ်ရုံထက်အများကြီးပိုအတွက် godmother ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁ ကြိမ်မြောက်ဂရမ်မီဆုရှင်နှင့်သူမကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့သော 'Fairy goddaughter' သည် Miley ၏ ၂၈ နှစ်တာကာလအတွင်းခံနိုင်ရည်မရှိသောနှောင်ကြိုးရှိသည်။
Dolly သည် Grammy အမည်ရှိပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်ကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်မကြာခဏပြုမူခဲ့သော်လည်းသူမသည်စံနမူနာပြ ဦး ဆောင်ခြင်းထက်ပိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် အကြံပေး ။
ငါသူမကိုငါထင်သောအရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်အားတန်ဖိုးရှိပြီးသူမသုံးသည်ဟုပြောပြီး၊ ဥပမာတစ်ခုကိုသာငါအသက်ရှင်လိုသည် ပြည်သူ့ 2019. ခုနှစ်တွင် [ငါဖြစ်ချင်ပါတယ်] ငါမှန်ရဲ့ထင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားထက်သာဓကဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတိုင်းကကွဲပြားတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခရီးရရှိပါသည်။ အချို့လူများကသင့်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကူညီရန်သွားကြသည်။ သူတို့သည်သင့်အတွက်လမ်းမှကျောက်တုံးအချို့ကိုကန်ထုတ်နိုင်သော်လည်းသင်မူကားလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
ဒီအကြောင်းအရာကို Instagram မှတင်သွင်းသည်။ သင်သည်တူညီသောအကြောင်းအရာကိုအခြားပုံစံဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏အချက်အလက်များကိုသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Miley Cyrus မှ @mileycyrus မှမျှဝေသည်။
ကံကောင်းတာက, Dolly Miley အဘို့အလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းရှိခဲ့သည်။ သူမသည် Miley ၏ Disney sitcom တွင်ပင်ထင်ရှားခဲ့သည် ဟန္န Montana ဇာတ်ကောင်ရဲ့နတ်သမီးကဲ့သို့ (အစစ်အမှန်ဘဝ၌လိုပဲ) ။
အဆိုတော်နှစ် ဦး လည်းမကြာသေးမီက 2019 Grammy Awards တွင်အတူတကွဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ပြပွဲကာလအတွင်း Dolly ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် Miley နှင့် Dolly တို့သည် 'ဂျိုလင်း' ကိုသင်မှန်းဆမိခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုအတွက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်သည်ဒေါ်လီအားဂုဏ်ပြုရန်အတွက်ကြီးမားသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ The Dolly Parton: MusiCares အခမ်းအနားသည် The အခမ်းအနား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်အချိန်တွင်လည်း (ဂရမ်မီဆုများ၌ထည့်သွင်းထားသည့်) Recording Academy သည် Dolly အားတစ်နှစ်တာအတွက်ပထမဆုံး MusiCares Person ၏အမည်ကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် ၆၁ ကြိမ်မြောက်ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမတိုင်မီကပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းပရိသတ်များအနေဖြင့်ယခုအပတ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြယ်ပွင့်ပါဝင်ဖျော်ဖြေပွဲ Netflix ကအထူးခေါ်အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ် Dolly Parton: တစ် ဦး က MusiCares အခွန်ဆက် , platformပြီလ7streaming ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။
st dymphna ဆုတောင်းချက်များ
Little Big Town မှတည်ခင်း, ည့်ခံသည့်ဖျော်ဖြေပွဲတွင် Miley၊ Katy Perry၊ Shawn Mendes၊ Willie Nelson၊ Leon Bridges၊ Chris Stapleton နှင့် Yolanda Adams တို့မှဖျော်ဖြေပွဲများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ! သင်ကရော? သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမှတ်ချက်များတွင်မျှဝေပါ။
ဒီအကြောင်းအရာကို third party မှဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းထားပြီးသုံးစွဲသူများရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကူညီဖို့ဒီစာမျက်နှာကိုတင်သွင်းထားတယ်။ piano.io တွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့်ဆင်တူသောအကြောင်းအရာများကိုသင်ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်
၃၀ Genius နောက်ဆုံးမိနစ်မိခင်များနေ့လက်ဆောင်များ
အိုးငါတို့အထူး Highlights ကိုချစ်!
Long Room Update ကို
ချောကလက် Streusel Muffins
ဤကြွယ်ဝသော Maple Pecan Pie သည်အံ့သြစရာကောင်း၏
Chives ပါသော Creamy အာလူးသည်ပြီးပြည့်စုံသောဘေးထွက်ဖြစ်သည်
Kale နှင့်အတူလှော် Spaghetti Squash
မက်မွန် - ဝီစကီဘာဘီကြက်သား
အမျိုးသားများအတွက် ဟယ်ရီပေါ်တာ လက်ဆောင်များ
ncis la 2018 မှထွက်ရန် ခဲယဉ်းနေပါသည်။